Xiddiga Manchester United Paul Pogba Oo Diiday Inuu Meesha Ka Saaro Ku Soo Laabashada Juventus
HomeWararka CiyaarahaXiddiga Manchester United Paul Pogba oo diiday inuu meesha ka saaro ku soo laabashada Juventus
October 8, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Paul Pogba ayaa qirtay inuu weli xiriir la leeyahay qaar ka mid ah asxaabtiisii ​​hore ee Juventus isla markaana uu jecel yahay Turin ka dib markii wax laga weydiiyay mustaqbalkiisa Manchester United iyo suurtogalnimada inuu dib ugu laabto kooxda Talyaaniga.
Ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka ee Faransiiska ayaa afar xilli ciyaareed ku qaatay Juventus – isagoo dhaliyay 34 gool isagoo kooxda ka caawiyay inay ku guuleysato afar horyaal oo Serie A ah iyo labo koob oo Coppa Italia ah – ka dib markii uu ka tagay Old Trafford sannadkii 2012kii.
Pogba ayaa ku soo laabtay United shan sano ka hor lacag rikoor ah oo aheyd 89 milyan ginni waxaana uu u saftay in ka badan 200 kulan Red Devils, isagoo la qaaday koob Europa League ah iyo EFL Cup intii uu macalin u ahaa Jose Mourinho.
Pogba ayaa dib ugu soo laabtay Turin fiidnimadii Khamiista kulankii semi-finalka Nations League ee France ay la ciyaareen Belgium wuxuuna ka caawiyay kooxda Didier Deschamps inay ka soo laabato 2-0 si ay u xaqiijiso guushii 3-2.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United ayaa wax laga weydiiyay xiriirka Juventus ka dib markii France ay ciyaartay Nations League wuxuuna yiri: “Waan jeclahay Torino [qosol ayuu ku daray]!
“Waxaan had iyo jeer la hadlaa asxaabteydii hore ee Juve sida [Paulo] Dybala. Hadda waxaan joogaa Manchester, waxaan ku jiraa qandaraas ilaa June aan aragno waxa dhaca.